Tuesday December 25, 2018 - 14:53:51 in Sawirada isbedbedelaya by Xisbiga Tiir
K/Galbeed oo ka mid ah Maamul Goboleedyada ka jira Soomaaliya waxaa dhawaan ka dhacay doorasho ay ka dhasheen dhibaatootyin fara badan, si kastaba ha u dhacaanee mar haddii laga soo gudbay doorashaooyinkaasi waxaa lagama maar-maan ah inuu caqliga talsho, lagana digtoonaado inay dhacaan dhibaatooyin kale oo aaney xamili Karin bulshadeena. Anigoo ka xun wixii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaan soo jeedinayaa Tallooyinka hoos ku qoran:-
1-In xaaladda la dajiyo, lagana fogaado wacx kasta oo colaad dambe abuuri kara.
2-In ummadda reer K/Galbeed loogu baaqo is cafis guud, dabadeedna la qabto Shirweyne dib u heshiisiin ah.
3-In wixii ka dhacay magaalada Baydhabo laga wada hadlo si xal looga gaaro, dilkii dhacey iyo Afduubkii loo geestey Muwadhinkii Soomaaliyeed iyo wadahadal lala furo isbedeldoonka.
4-In laga wada shaqeeyo sidii Nabad ay ugu noolaan lahaayeen shacbiga reer K/Galbeed.
5-In loo soo jeesto hannaankii ay horumar ku gaari lahaayeen bulshada ku dhaqan deegandaasi.
6-In siyaasiyiinta K/Galbeed ay u hogaansmaaan rabitaanka ummaddooda. Haddii arimahaan loo hogansamo waxaan aaminsan ahay inay wax badan iska badali doonaan xaaladda K/Galbeed, waxaan Alle ka baryayaa inuu quluubtooda isu soo dumo bulshada K/galbeed.